Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (မ) / တင်ဇာမော်
Category Archives: တင်ဇာမော်
တင်ဇာမော် – Collections
No. Song Title Download 1. အချစ်အက်စစ် Download 2. အချစ်ကျောင်းသူ Download 3. အချစ်ငှက်ငယ် Download 4. အချစ်ရဲ့ဆု Download 5. အဆိုးဆုံးလေး Download 6. အချစ်မရှိနေ့ရက်များ Download 7. အရောက်လာမယ် Download 8. အိမ်စောင့်သူ Download 9. ဘ၀ရဲ့အခိုးအငွေ့များ Download 10. ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ် Download 11. ဘ၀ဆက်တိုင်း Download 12. ချစ်တတ်တဲ့နှုတ်ခမ်းလေးများ – ဘိုဘို + တင်ဇာမော် Download 13. ချစ်သူလာရာလမ်း Download 14. အိပ်မက်ထဲက ဥယျာဉ်နန်း Download 15. မှားပြန်တယ် Download … Continue Reading →
February 28, 2013 Shanlay အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) တင်ဇာမော် Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
တင်ဇာမော် – စွဲလမ်းမှုပြဿနာ
ရှာနေတာကြာပေါ့ဗျာ။ သီချင်းတွေလိုက်ရှာရင်းနဲ့ ရလိုက်တာနဲ့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ 01 အချစ်အက်ဆစ် 02 အမြန်ဆုံး 03 ပထမခြေလှမ်း 04 စွဲလမ်းမှုပြဿနာ 05 အချစ်နဲ့ဂစ်တာ 06 ပြန်လည်၍အသစ်တဖန် 07 မင်းလက်ထဲမှာ 08 ၂၁ ရာစု(စိတ်ကူးယဉ်သီချင်း) 09 မင်းအတွက်အမုန်း 10 စရိုက် 11 ဇာတ်သိမ်း 12 နာရီအသစ်တွေပတ်ထားလိုက်ပါ 13 ဆန့်ကျင်သူများရဲ့အဝေး 14 မကြိုက်ဘူး တိုက်ရိုက်လင့်ခ်တွေပါပဲဗျာ။ Mediafire Link Ifile Link Credit : MMCYBERMEDIA ** စကားမစပ်ဗျာ mmcybermedia ကတော့ အဖွဲ့ဝင်စာရင်းဝင်စရာမလိုပဲ ဒေါင်းခွင့်ပြုလိုက်ပြီပဲ။ ကျေးဇူးပါပဲဗျာ။
July 1, 2011 mars အဆိုတော် (မ) တင်ဇာမော် Leaveacomment
ပြန်မယ်ပြန်မယ် – တင်ဇာမော်
September 15, 2010 kogyithet အဆိုတော် (မ) တင်ဇာမော် Myanmar Artist Leaveacomment